बारबेल स्क्वाट्स - सबै कुरा तपाईको बारेमा जान्नु पर्छ बेजिया
सुसाना Godoy | 04/05/2021 16:00 | व्यायाम
तपाईं बारबेल स्क्वाट गर्नुहुन्छ? यदि तपाईंले अहिलेसम्म यस्तो विचारको लागि रोज्नु भएको छैन भने, तपाईंसँग अझै समय छ किनभने तपाईं पक्कै राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामीलाई थाहा छ कि स्क्वाटहरू जहिले पनि यसको नुनको मूल्यको कुनै प्रशिक्षणको अंश हुन्छन्, यति विविध प्रकारको हुनुको साथै हामी उनीहरुलाई थाँहाउँदैनौं।
त्यसकारण, आज हामी ती पनी प्रयोग गर्नेहरूसँग बाँकी छौं र त्यस्तै, ती हामीलाई अनन्त फाइदाहरू पनि प्रदान गर्छन् जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ। पहिले तपाईले पत्ता लगाउनु हुनेछ यस व्यायामको साथ सब भन्दा बढी काम गर्ने क्षेत्रहरू के हुन् र कसरी तपाइँ तिनीहरूलाई सहि गर्नुहोस्। हामीले सुरु गर्यौं!
1 बारबेल स्क्वाट्सले के गर्छ?
2 आधारभूत गल्तीहरू हामीले सुधार गर्नुपर्दछ
3 बारबेलको साथ स्क्वाटिंगका लागि उत्तम टेक्निक के हो?
बारबेल स्क्वाट्सले के गर्छ?
सबै भन्दा पहिले यो स्क्वाट गर्न को लागी आउँछ, जो हामी मिनेटबाट काम गरिरहेका छौं एउटा क्वाड्रिसिप्स। यद्यपि यो सत्य हो कि तल्लो शरीर सामान्यतया मुख्य पात्रहरू मध्ये एक हो। यसको बावजुद, यो सत्य हो कि धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गर्दछन् कि यो केवल खुट्टाका लागि अभ्यास हो र हैन। हामीले पहिले नै देख्यौं कि यस क्षेत्रको अतिरिक्त, काठ र पछाडि पनि धेरै समावेश छ। यस तरिकाले, हामीसँग सही व्यायामको मजा लिनको लागि हामीसँग राम्रो कार्यन्वयन हुनै पर्छ। यसैले हामी यसलाई थप गर्न सक्दछौं गौणको रूपमा यो पछाडिको पछाडिको मांसपेशिहरू वा अपहरणकारीहरू र abdominals समावेश गर्दछ।
आधारभूत गल्तीहरू हामीले सुधार गर्नुपर्दछ
एउटा गल्ती जुन हामीले जहिले पनि स्क्वाट्स प्रदर्शन गर्दा टाढा रहनुपर्दछ ट्रंकलाई अगाडि ल्याउनु हो। कहिलेकाँही, बारको कारण, हामी काँधहरूलाई अझ अगाडि बढाउछौं जसले संकेत गर्छ कि पछाडिको राम्रो स्थितिमा छैन। त्यसैले हामी सिधा पछाडि तल आउँनु पर्छ यसलाई आर्च बिना नै। अवश्य पनि, तल जाँदा जब घुँडाको खुट्टाको सल्लाहहरू भन्दा बढी हुँदैन। न त तपाई घुँडा सँगै सँगै ल्याउनु पर्छ जब तल जाँदा र कम हुँदा पनि। किनकि यो प्राय जसो गल्ती गल्तीहरू हो र यो कि हामीले हाम्रो प्रशिक्षणको सही प्रयोग गर्नको लागि हर हालतमा जोगिनु पर्छ र हाम्रो शरीर सधैं सावधान छ।
त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा वंश तलको मुद्दा हो। केहि व्यक्तिहरू पर्याप्त तल्लोमा जान सक्दैनन् र अरूहरू पनि तल्लो स्तरमा जान्छन्। त्यसोभए, तपाईले सँधै सन्तुलित टेक्निक राख्नु पर्छ। यस प्रक्रियामा मांसपेशी सक्रियतालाई असर गर्न सक्छ, त्यसैले यदि तपाईं एक शुरुआती हुनुहुन्छ भने धेरै वजन लिनु नहुनु राम्रो हुन्छ। जब फिलाहरू कम गर्दा तिनीहरू जमीनमा समानन्तर हुनै पर्छ। यस तरिकाले तपाईलाई थाहा छ कि ग्वाट्ट्सले क्वाड्रिसिप्स र अरूलाई बिर्सन बिना उनीहरूको काम गर्न सुरू गरिसकेका छन्।
बारबेलको साथ स्क्वाटिंगका लागि उत्तम टेक्निक के हो?
त्रुटिहरू हेरेपछि हामी स्पष्ट हुन्छौं कि हामीले सही आन्दोलनहरूमा शर्तहरू राख्नु पर्छ र सबै प्रकारका शंका हटाउनुपर्दछ। यस कारणका लागि, एक राम्रो प्रविधिको गर्नका लागि, यसले विभिन्न चरणहरू सँगै ल्याउँदछ, जुनसुकै अवस्थामा पनि सरल छ, तर विन्दुमा वास्तवमै उपयोगी:
हामी दुबै हातले पट्टी समात्दै उठ्छौं। यसको वजन पनि सन्तुलित हुनुपर्दछ ताकि हामी सहि हिंड्न सकौं।
दुबै घुँडा र खुट्टा धेरै खुल्दैनन् तर आरामदायी स्थितिमा र प्राकृतिक, दुबै क्षेत्रहरुमा तनाव हटाउन।
तपाईं तल जानुहुन्छ तपाईंको पछाडि सीधा राख्नुहुन्छ, तपाईंको काँधमा अगाडि शिकार नगरी।
याद गर्नुहोस् कि घुँडाले छुनु हुँदैन वा नजिक पनि आउनु हुँदैन। त्यसैले हामीले सफा र तलको आन्दोलन गर्नुपर्छ। आन्दोलनलाई मजबुत गर्नबाट बच्न र घुडाको मात्र होईन, तर खुट्टाको पनि, जुन कुनै पनि समयमा झुक्नु हुँदैन।
अब तपाईलाई अलि बढी थाहा छ, मुख्य अभ्यास जुन तपाई एक साधारण तरीकाले अभ्यासमा राख्न सक्नुहुन्छ। सँधै यसलाई आफ्नै आवश्यकताहरू अनुकूल बनाउँदछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » व्यायाम » बारबेल स्क्वाट्स
थोरै विवरणहरू जुन तपाईं स्वस्थ जीवन पाउनबाट रोक्नुहुन्छ